काठमाडौं । डा. गोविन्द केसी अनशन बस्ने तयारीका साथ इलाम पुगेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आन्दोलनरत डा. केसी १६ औं अनशनका लागि इलाम पुगेका हुन् ।
१६ औँ अनशनको लागि डा. केसीले दिएको अल्टिमेटम आज सकिएपछि अनशनको लागि उनी पूर्वी नेपालको इलाम पुगेको उनका सहयोगी डा. अभिषेकराज सिंहले जानकारी दिए ।
केसीले १६ औं अनसनका लागि सरकारसँग ३ बुँदे माग राखेका छन् । पहिलो बुँदामा उनले १५ औं सत्याग्रहका क्रममा गत साउन १० गते सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गरेका छन् ।
उनले आफूसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरस संशोधन गरेर संसदबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्न माग गरेका छन् । सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने काम अघि बढाउन, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसको भर्ना अविलम्ब खोल्न पनि केसीले माग गरेका छन् ।
केसीले बुधबारदेखि अनसन बस्ने तयारी गरेका छन् ।